NYI LYNN SECK 18+ DEN: 2008
Posted by NLS at 12/31/2008 09:51:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/31/2008 01:12:00 AM0comments Links to this post
တစ်နှစ်ကျှော ရပ်ထားတဲ့ Myanmar Machine Translation ကိစဿစကြီး ရုတ်တရက် ပြန်စပြီလို့ သိရပါတယ်။ ပညာရေး၊ သိပဿပံ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၃ခု ပူးပေါင်းပြီး အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ အပြင်က သတင်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြားမိတယ်။ သတင်းစာ ထဲမှာတော့ ကွန်ပျူတာ စနစ်သုံး မြန်မာစာ အသုံးပြုရေး အဖွဲ့ဆိုလား ဖွဲ့စည်းပြီး Machine Translation ပှေါပေါက်လာအောင် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ ကိစဿစတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ဖြစ်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တှော့မှာ တခြားအလုပ်တွေ ရှိနေတာရယ်၊ ကိုယ်မလုပ်လည်း လုပ်မယ့်လူတွေ ရှိနေတာရယ်ကြောင့် လိုင်းတွေ သွားမပူးတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ထမင်းစားဖို့လည်း ပိုက်ဆံ ရှာရဦးမယ်လေ။ တှောကြာ ဒီတစ်ခါပါ အဲဒီဘက် လည်သွားရင် ပထမ တစ်ခေါက်ကလို မိဘတွေဆီက ဒှေါလာ ၈၀၀ ထပ်ချေးနေရဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောကတော့ တှောတှောများများ ထင်နေကြသလို အဲဒီဟာဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ အချိန်တိုတွင်း ပြီးစီးနိုင်တဲ့ ကိစဿစလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် လေ့လာ စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ အရပါ။ ဘယ်လောက်ခက်တယ် ဆိုတာ အနည်းအကျဉ်း လုပ်ဖူးရင်တောင် သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ဆီမှာ Research ဆိုတဲ့ ကိစဿစကြီးကို အရေးမပါသလို ကျှောကျှောပစ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းက Research ကောင်းမှ Result ကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် Research လုပ်ဖို့ အချိန်တွေ နည်းပညာတွေ လိုအပ်ပါမယ်။
ဒီဟာကြီးကို မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဘယ်သူတွေ လုပ်နိုင်မလဲလို့ ကျွန်တှော့ စိတ်ထဲက မျက်စိထဲက ပုံဖှောကြည့်နေမိတယ်။ သူက ဟိုနေရာမှာတှောတယ်။ သူက ဒီနေရာမှာတှောတယ်။ တချို့လည်း မရှိတော့ဘူး တချို့လည်း ရှိသေးတယ်။ တချို့က ပညာရပ်ပိုင်း သိပ်မတှောပေမယ့် မျက်လှည့် လက်လှည့်တော့ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ပြီးမယ် ဆိုရင်တော့လည်း ကောင်းတာပေါ့လေ။ ကျွန်တှောတို့တွေ မြန်မြန် သုံးလို့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောပြောတဲ့ မြန်မြန် ဆိုတာက ၅နှစ်လောက်ကို ပြောတာ။ ဒီထက် မြန်မြန် ပြီးအောင်ကတော့ ဒေးဗစ်ကော့ပါးဖီးလ်တောင် လုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ မြန်မာတွေက သိပ်တှောကြတယ်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်လည်း သိပ်ကောင်းကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဟာ ထွက်ပှေါလာတဲ့အခါ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ထူးခြားလိမ့်ဦးမယ်လို့ ကျွန်တှော ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေ ဘာတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ၊ ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လို အခက်အခဲ ရှိတယ် ဆိုတာတွေကို တချိန်က ကျွန်တှော စာတမ်း တစ်စောင် ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီစာတန်းကို နောက်နှစ်ထဲ နိုင်ငံခြားမှာများ ကျွန်တှော ဖတ်ဖြစ်မလား မသိဘူး။ အာရုံ လာရင်ပေါ့။
Posted by NLS at 12/30/2008 10:41:00 PM0comments Links to this post
Labels: Diary, NLP
1394 x 1754
နန်းညီရဲ့ဆိုဒ်မှာ ဒါလေး တွေ့မိလို့ ပြန်ဆွဲထားလိုက်တာပါ။
Posted by NLS at 12/30/2008 08:09:00 PM0comments Links to this post
Labels: Arts, Download, My Designs, Sharing
တနေ့က ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ(၁) ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဖိုးဝမီဒီယာက သူငယ်ချင်း အောင်ပြည်စိုးက အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပေးလာတယ်။ ကျွန်တှော အဲဒါလေးကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ဒါဟာ မြန်မာပြည်အတွက် အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ အထဲက စာတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ ပန်းချီ အနုပညာ သမိုင်းကားချပ်တွေကို သိလာရတယ်။ စာတွေနဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အတွေးအခှေါ အယူအဆတွေကိုလည်း ပိုင်းဆစ် ပြထားသေးတယ်။ ရှားပါးတဲ့ ပန်းချီကားချပ်တွေကိုလည်း ခံစားလို့ ရသေးတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို အမေရိကန်စင်တာက ကမကထ ပြုပြီး ထုတ်ပေးတာလို့ သိရပါတယ်။ တန်ဖိုးက တစ်သောင်းခွဲပါ။ တန်ဖိုးနဲ့ မလိုက်အောင်ကို ဝယ်သိမ်းထားသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ မြန်မာ့ အနုပညာစာအုပ်တွေထဲမှာ အဲဒီလောက် ပြည့်စုံတဲ့ အဆင့်မီတဲ့ စာအုပ် မရှိသေးဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ပန်းချီကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း အမြန်ပြေး ဝယ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ကိုယ်တိုင် မဝယ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တှော့ သိပ်ကြိုက်တဲ့ အရာကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ပရိုဂျူဆာ ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးအရမ်း တင်နေမိကြောင်း။
အယ်ဒီတာ အောင်မြင့်၊ စာရေးသူ အောင်မင်း
တန်ဖိုး ၁၅၀၀၀ ကျပ်
Posted by NLS at 12/29/2008 12:41:00 PM0comments Links to this post
Labels: Acknowledgement, Book, Friend
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သာသနဝေပုလဿလ ကျောင်းတိုက်က ဆရာတှော အရှင်ကောဝိဒ ဦးစီးပြီး စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာ ရဟန်း၊ ရှင်လူ အားလုံးအတွက် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ပြန့်ပွားရေး သင်တန်းလေးတွေ ပို့ချဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ဆရာတှောများနဲ့ လူပုဂဿဂိုလ်များက လုပ်အားဒါန ပြုနေကြပါတယ်။ အခု A+ နဲ့ Networking သင်တန်းလေး စတင်ဖို့ရာ အဆောက်အဦလေး တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အလှူငွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ အုတ်၊ သဲကျောက်၊ ဘိလပ်မြေနဲ့၊ ပန်းရန်လက်ခ အပါအဝင် မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သိန်းခွဲလောက်သာ လိုအပ်နေတာပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီမှာ အသုံးပြုဖို့ မီးစက်တစ်လုံးလည်း လိုအပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကမဿဘာအနှံ့အပြားက မြန်မာများ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဒါန ပြုနိုင်ပါကြောင်း အကျိုးမြှောကာ နှိုးဆှောအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ကျွန်တှော့ဆီက တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်သလို ဆရာတှောကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်း လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by NLS at 12/27/2008 12:32:00 PM0comments Links to this post
Labels: Donation, Help
Posted by NLS at 12/25/2008 09:51:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/25/2008 03:24:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/25/2008 12:47:00 AM0comments Links to this post
If you are interesting in Asia and Myanmar's social, economic and environmental development, you must download and see it. It was compiled from global sources maintained by United Nations agencies and other international organizations.
Direct Download: PDF | 2.3 Mb
Posted by NLS at 12/24/2008 10:46:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Ebooks, Myanmar, PDF
သတဿတမ နည်းပညာရပ်ဝန်း နဲ့ မြန်မာ သတင်းသမဂဿဂ ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ မကြာခင်မှာ Myanmar Blog Academy Award 2008 ကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို မသိရသေးပေမယ့် မကြာမီ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ www.mmblogpress.com ကနေ လွှင့်ထုတ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဤ ဘလော့ဂ်များ စာရင်းကို ပြုစုရာတွင် -
(၁) ဖျက်သိမ်းသွားသော ဘလော့ဂ်များ၊ ငါးလနှင့်အထက် ဘလော့ဂ် မရေးဘဲ ရပ်တန့်နေသူများကို စာရင်းတင်သွင်းခြင်း မပြုပါ။
(၂) နှစ်ယောက်နှင့်အထက် ရေးသူများကိုလည်း အစုအဖွဲ့ဟု သတ်မှတ်သည်။
(၃) ဘလော့ဂ်များ စဉ်ရာတွင် အလျဉ်းသင့်သလိုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝါအရ၊ အကဿခရာစဉ်အရ မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်တွင် ရောက်ရှိရှာဖွေ သည့်အတိုင်းသာ အစီအစဉ်မဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by NLS at 12/24/2008 07:31:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/22/2008 12:38:00 AM2comments Links to this post
Posted by NLS at 12/20/2008 10:28:00 PM 1 comment Links to this post
ဒီနေ့ အင်တာနက်တက်တော့ သတင်းတစ်ပုဒ် တွေ့မိတယ်။ စံနေတဲ့သူတွေကို ပယ်နိုင်ဖို့ စံပယ် လှုပ်ရှားမှု လုပ်ကြမယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ဒါကို ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ နှစ်ပါတ်တိတိ စံပယ်ပန်းတွေကို ဘုရားမှာ လှူကြပါ၊ ပန်ကြပါ၊ မှောတှောယာဉ်မှာ ချိတ်ဆွဲကြပါ၊ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ထည့်ကြပါ ဘာညာပေါ့။ ကျွန်တှော့မယ် ဘယ်လိုတောင် ဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး။ ဘုရားမှာ စံပယ်ပန်း လှူတယ်ဆိုတာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး ဟိုးအရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက။ ကားမှာ စံပယ်ပန်း ချိတ်တာကလည်း အခုမှ မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ကိစဿစကြီး။ ဒါမျိုး ရောချပြီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုထဲ ထည့်တာကတော့ ရုပ်ပျက်လွန်းအား ကြီးပါတယ်။ ဘုရားပှေါက စံပယ်ပန်းသည်ကို ဒါငါတို့ကို ထောက်ခံလို့ ရောင်းနေတာလို့ ပြောရမလား။ ကားပှေါမှာ စံပယ်ပန်း ဆွဲမိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ငါတို့ကို ထောက်ခံနေသူကြီးပါလို့ မှတ်တော့မလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလူတွေက ပြသဿသနာတက်မှာ ကြောက်ပြီး ကိုယ့်စီးပွားရေး အပျက်ခံ ပန်းမရောင်းဘဲ နေရမလား။ ဒီလို သိပဿပံခေတ်ကြီးထဲမှာ စံနေတဲ့သူကို ပယ်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ယတြာလိုလို အတိတ်လိုလို တဘောင်လိုလို ဟာတွေနဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ အကျင့်စရိုက်ကြီးကို ဘာလို့များ ဖှောထုတ်ချင်ရတယ် မသိဘူး။ လုပ်ချင်ရင်လည်း ယိုးဒယားက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အဝါနဲ့ အနီ ဝတ်သလို ဝတ်ကြပေါ့။ အခုဟာကတော့ဗျာ ဒီသတင်း မသိဘဲ ရိုးရိုးသားသား ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကို စံပယ်ပန်း ပန်မိရင်၊ ဘုရားမှာ လှူမိရင်၊ ကားထဲမှာ ချိတ်ဆွဲမိရင်တောင် တစ်ဖက်ကလည်း ငါတို့ကို ထောက်ခံလို့လို့ တွေးနိုင်သလို တစ်ဖက်ကလည်း လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါနေတဲ့ သူပါလားလို့ ထင်ယောင်ထင်မှား မဖြစ်သွား စေဘူးလား။ မဆိုင်တဲ့သူတွေ ဒုကဿခမရောက်ဘူးလား။ ဒီအကြံကိုတော့ ကျွန်တှောဖြင့် အံ့ဩလို့ မဆုံးဘူး။ Ambiguous ဖြစ်အောင်ကို တမင်လုပ်တာလားဗျာလို့ မေးချင်ပါရဲ့။ ဒီပိုစ့်ရေးလို့ စိတ်ဆိုးချင် စိတ်ဆိုးကြမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော စိတ်ထဲမယ် ခံစားမိတဲ့အတိုင်း ရေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီအတွက် တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ လူငယ်တွေထဲ ကျွန်တှော မပါဘူး ပြောမယ်ဆိုလည်း ခံရုံပေါ့ဗျာ။
PS: စံပယ်ဆိုတာကို မြန်မာအဘိဓာန်မှာ အဓိပဿပာယ် နှစ်မျိုး ဖွင့်တယ်။ တစ်မျိုးက စံပယ်ပန်းပေါ့။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ တင့်တယ်သည်။ ကျက်သရေ ရှိသည်။ ခမ်းနားကြီးကျယ် တင့်တယ်စွာ နေထိုင်သည် ဆိုပဲဗျ။ စံနေတဲ့သူကို ပယ်နိုင်အောင် စံပယ်ပန်း ယတြာချေရမယ်လို့ အခါပေးတဲ့ ဗေဒင်ဆရာများရှိရင် တွေ့ချင်ပါသေးရဲ့ဗျာ။ ဘာနည်းနဲ့များ တွက်သလဲလို့။
Posted by NLS at 12/20/2008 09:29:00 PM0comments Links to this post
ဟောဒီ မြေပုံလေးကို လိုချင်လို့ ရှာခဲ့ရတာ အကြာကြီးပဲ။ တကယ်တမ်း ဒီမြေပုံရဲ့ မူရင်းက မှောလမြိုင် တောင်ပေါက် ဆရာတှောကြီးရဲ့ ဗုဒဿဓသာသနိက ပထဝီဝင်ကျမ်းကြီး ထဲက မြေပုံပါ။ ဗုဒဿဓခေတ် တိုင်းကြီး ၁၆တိုင်းနဲ့ မဇဿဈိမဒေသ မြေပုံပေါ့။ အဲဒီ စာအုပ်ကတော့ သိပ်ရှားပါးနေပြီ။ အခု မြေပုံကိုတော့ ဒုတိယမဲထီး ဆရာတှောကြီးရဲ့ မာလာလကဿငာရ ဝတဿထုတှောကြီး ပထမအုပ်ကနေ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် ဟံသာဝတီရဲ့ စတုတဿထအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်မှာမို့ ပါတာပါ။ ဟိုးတုန်းက အိနဿဒိယမှာ ဘုန်းဘုန်း ဦးကုမာရ ပေးလို့ အဂဿငလိပ်လို မြေပုံရခဲ့ဖူးတယ်။ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့နဲ့ ဘယ်ရောက်သွားတယ် မသိဘူး။ အဲဒါလေးလည်း တှောတှော နှမြောမိတယ်။
Posted by NLS at 12/18/2008 10:15:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Download, Map, Religion
ဆရာကြီး သိန်းဖေမြင့်ဟာ ကျွန်တှော သိပ်နှစ်သက်တဲ့ အားကျတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ အဓိက နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ဦး ဖြစ်သလို၊ သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း စာနဲ့ပေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကြောင့် နောင်လာနောက်သား ကျွန်တှောတို့ ဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တကဿကသိုလ်မှာတုန်းကလည်း ဆရာကြီးရဲ့မြေး ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ အတှော ခင်မင်ခဲ့ကြသေးတယ်။ တကယ်တော့ သူဆရာကြီးရဲ့ မြေးဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှ သိခဲ့ရတာပါ။ ဘရောက်ဒါ ဝါဒကို မြန်မာပြည်ထဲ ဆွဲသွင်းလာသူရယ်လို့ သခင်စိုးတို့ သခင်သန်းထွန်းတို့က စွပ်စွဲတာ ခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာသိန်းဖေမြင့်ဟာ ပြောရရင် အတှော ဒူပေဒါပေ ခံနိုင်ရည်ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှန်ပြောရဲတဲ့ သတဿတိလည်း သိပ်ရှိတယ်။ တက်ဘုန်းကြီး ဝတဿထုတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့တင် ဆရာ့လက်စွမ်းကို သိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တှော့ဆီမှာ ဆရာ့စာအုပ်တွေ တှောတှောများများ ရှိတယ်။ တှောတှောလည်း ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်ကျတော့ သခင်တင်မြရဲ့ ဆွေးနွေးခန်းတွေ သွားဖတ်ရင်း မှတ်သားစရာလေး တစ်ခု သွားတွေ့ပါတယ်။
မဟာမိတ်နှင့် မြန်မာ့တမန် စာအုပ်ကို ဖတ်တုန်းက သူတို့ အိနဿဒိယ ရောက်နေချိန် မြန်မာပြည်ကနေ ရဲဘှောတင်ရွှေ ပြန်ရောက်လာတော့ ခင်ဗျားဟာကလေး သေသွားရှာပြီ ဆိုတဲ့စကားလေး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပါပဲ။ နောက်ပိုင်း သခင်တင်မြနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း စာအုပ်ထဲမှာမှ အဲဒီအကြောင်းလေး ပြန်အစပှေါလာတယ်။ ဆရာ့ပထမဆုံး ရည်းစားက ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုရဲ့ သမီးပါတဲ့။ သူတို့ ကုလားပြည် ရောက်နေချိန်မှာ သခင်တင်က မီးခွက်မှုတ်လို့ ရှက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားတာ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပါလာတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်အတွင်း ခရီးသည်မှာ ဆရာသိန်းဖေမြင့်က သူ့ရည်းစားကို ခှေါခဲ့ဖို့ မှာလိုက်တဲ့အကြောင်း မပါဘူး။ ရဲဘှောတင်ရွှေ သူ့ရည်းစား မမြရီကို လက်ထပ်ပြီး ခှေါလာတာတော့ ပါပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ကောင်မလေး ဆုံးသွားလို့ ဝမ်းနည်းသွားတဲ့ ခံစားချက်ကို ထည့်မရေးခဲ့ဘူး။ အိနဿဒိယကို ခှေါခဲ့ခိုင်းတယ် ဆိုတာလည်း မပါဘူး။ အဲဒီညက မအိပ်နိုင်ဘဲ မျက်စိကြောင်နေတယ် ဆိုတာလောက်ကိုသာ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က သခင်တင်ကြောင့် ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိကြဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို နောက်ပိုင်းမှ စစ်ဆေးရင်း သိကြလို့ပါ။ ဘုံဘဝမှာဖြင့် ထဲမှာတော့ ကောင်မလေး သေသွားတဲ့အကြောင်း ရေးထားတယ်။ သူ့အဖေ နေရာမှာတော့ xxx ရဲ့သမီး ဆိုပြီး နာမည်ကို ဖှောပြမထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါလေးကို အမှတ်တရအဖြစ် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာသိန်းဖေမြင့်ဟာ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုရဲ့ သမီးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီ ရည်းစားဦးဟာ သခင်တင်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားတယ် ဆိုတာလေးပါ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ စာဆိုတာ ဆက်စပ် ဖတ်မိတဲ့အခါ သိပ်အရသာ ရှိပါတယ်။ သခင်တင်မြနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း စာအုပ်ထဲမှာ အဲဒီ သခင်တင် မီးခွက်မှုတ်တဲ့အကြောင်းကို ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျှောဇောက ယိုးဒယားကနေ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးတယ်လို့ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒါလေး မှတ်ထားလိုက်တယ်။ နောင်တချိန် အခွင့်ရရင် ဖတ်ချင်သေးတယ်။
မဟာမိတ်နှင့် မြန်မာ့တမန် - သိန်းဖေမြင့်
သခင်တင်မြနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - လူပေါင်းစုံ
ဘုံဘဝမှာဖြင့် - သခင်တင်မြ
Posted by NLS at 12/18/2008 08:33:00 PM0comments Links to this post
Labels: Book, Knowledge, Selection
Posted by NLS at 12/17/2008 09:22:00 PM0comments Links to this post
မနေ့က မနဿတလေးမှာ MCPA ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်သူဆုရတာ ဘာကြောင့်၊ ဘယ်သူတွေကတော့ ဘယ်လို အကြောင်းတွေကြောင့် ဆုမရဘူး ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖြစ်တယ်။ အားလုံး ကြိုးစားပမ်းစား စိတ်ဝင်တစား ပြိုင်ကြပေမယ့် အမှတ်ကို ရအောင် မယူတတ်တာကြောင့် အားလုံးလိုလို ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ခဲ့ကြဘူး။ မေးခွန်းက Portion တစ်ခုချင်းစီ Function တစ်ခုချင်းစီအတွက် အမှတ်ပေးထားတယ်။ အဲဒါလေးကို သေချာပြောထားပေမယ့် သူတို့ စိတ်တွေလောပြီး တစ်ပုဒ်လုံးဖြေ အမှတ် ၁၀၀ ကိုရအောင် အားထုတ်ကြတော့ ပရိုဂရမ်က မပြီးဘဲ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ Priorty ပေးရမယ့်ဟာကို သူတို့ မခွဲကြဘူး။ ဥပမာ ဒီတစ်ခု Pass ဖြစ်မှ ကျန်တာတွေ ဆက်အမှတ်ပေးလို့ ရမယ်ဆိုရင် အဲဒီတစ်ခုကို သေသေချာချာကြီး Run နိုင်အောင် လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် စာရွက်ပှေါမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဘာစလုပ်မယ်၊ ဘာတွေဟာ ဘာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်၊ ကန့်သတ်ချက်တွေကဘာ၊ လုပ်ရမှာကဘာ စတာတွေကို ချရေးထား သင့်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေ နဲနဲလွဲသွားတော့ သူတို့ ကုဒ်ဒင်တွေ ကောင်းပေမယ့် ရသင့်သလောက် အမှတ် မရဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒီကနေ ပြန်လာတော့ နေ့လည်ခင်း ကျွန်တှော အိပ်တယ်။ ၄နာရီလောက် ပြန်နိုးတော့ ၁၆ကျောင်းနားက ကိုမြင့်လွင်ဆိုင်မှာ တုတ်ထိုးသွားစားတယ်။ တုတ်ထိုးစားပြီး ဆိုင်ကယ်လျှောက်စီး နေတုန်းမှာ ကျွန်တှော မုဒ် ပျက်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့မှန်း မသိဘူး။ မနဿတလေးမှာ နေရတာ သိပ်ပျင်းဖို့ ကောင်းသွားသလို ခံစားလာရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဟိုနားဒီနား ဆိုင်ကယ်နဲ့ လျှောက်သွားတယ်။ စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်သွား စာအုပ်လေးဘာလေး သွားရှာတယ်။ သုံးလေးငါးအုပ်ဝယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပျက်သွားတဲ့မုဒ်က ပြန်မကောင်းလာဘူး။ နောက်ဆုံး ကိုဂျေအယ်ကြီးကို ဖိတ်ခှေါပြီး ၇၄လမ်းပှေါက လှိုင်းဆိုတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်စကားပြောဖြစ်တယ်။ မင်းကွာ တုတ်ထိုးစားပြီး မုဒ်ပျက်ရတယ်လို့တဲ့... သူကပြောတယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီ ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့ ၉နာရီ ထိုးလောက်ကျတော့ ကျွန်တှော ပြန်လာခဲ့တယ်။ မနဿတလေးမှာလည်း မီးတွေက ပျက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်း စာဖတ်ရတယ်။ ဟိုဘက် သုံးလမ်း လေးလမ်းလောက်မှာ ဘုရားပွဲ ရှိတယ်နဲ့ တူတယ်။ သီချင်းသံတွေ ကြားနေရတယ်။ ကျွန်တှော တှောတှောနဲ့ အိပ်မပျှောဘူး။ မနဿတလေးမှာ စီးပွားရေး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကျွန်တှော စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒါကလည်း အခုမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂နှစ်လောက် ရှိနေပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေက ရန်ကုန်မှာ မလုပ်ဘဲ မနဿတလေးမှာ လုပ်ချင်တဲ့ ကျွန်တှော့ကို အထူးအဆန်း ကြည့်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မနဿတလေးဟာ Potential အများကြီး ရှိတယ်လို့ ကျွန်တှော့ စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့ ယုံကြည်ချက်တွေက ပိုက်ဆံရှိမှ အကောင်အထည်ဖှောလို့ ရတာမျိုး မဟုတ်လား။ ကျွန်တှော အိပ်ပျှောတော့ မနက် ၃နာရီတောင် ထိုးတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ လေယ်ဉာက ၁၂နာရီ။ စောစော ထရမယ်။
Posted by NLS at 12/17/2008 08:48:00 PM0comments Links to this post
မနေ့က အဲပုဂံနဲ့ မနက် 6:10 ထွက်တယ်။ မနဿတလေးရောက်တော့ 7:10၊ ကားငှားပြီး ဂရိတ်ဝေါ ဟှောတယ်ကို သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ခဏနားပြီး မုန့်တီသွားစားကြတယ်။ ဒှေါသန်းမြင့် ဆိုလားပဲ။ အဲဒါပြီးတော့မှ တောင်ပှေါတက်တယ်။ စည်လိုက်တဲ့ပွဲ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တှောတို့ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ တက်လာတဲ့ မှောဒယ်က အသားကမည်းမည်း အဝါရောင် အကဿငျီလက်ပြတ်နဲ့ ဘောင်းဘီတို ဖင်ကြပ်နဲ့၊ နေကလည်း ပူလိုက်တာမှ ကမ်းကုန်၊ ကွင်းလယ်ခေါင် ထီးထီးကြီးထဲက စင်မြင့်ခုံကြီးဘေးမှာ ရပ်ကြည့်နေသူ ပရိသတ်က လေးယောက်လား ငါးယောက်လား။ တကယ်တကယ်။ ပရိသတ် ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ စတိတ်ခုံကြီးပှေါမှာ ဘယ်လို ခံစားချက် တွေနဲ့များ ဒီမှောဒယ်တွေ အဆိုတှောတွေ ဆိုနေ ပြနေ ကြသလဲဆိုတာ ကျွန်တှောဖြင့် ခံစားလို့ဖြင့် မရနိုင်ပါကြောင်း။
Posted by NLS at 12/14/2008 11:36:00 AM0comments Links to this post
Labels: Diary, Mandalay, News
Mercantile Marine CD 26/CE 24
ဦးနှောက်တွေက မကောင်းတော့တာ တချို့ သူငယ်ချင်းတွေ နာမည် စဉ်းစားလို့တောင် မရတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါတောင် ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေ ရှိနေသေးလို့။ ဒီနေ့မှ စကန် ပြန်ဖတ်ပြီး သိမ်းထားဖြစ်တော့တယ်။ တှောတှောများများလည်း အိမ်ထောင်ကျကုန်ကြပြီ။ တှောတှောများများလည်း Chief Mate ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ တှောတှောများများလည်း စကဿငာပူမှာ အချေကျ နေကြပြီ။ ကျွန်တှောကသာ ပင်လယ်အစစ် မဟုတ်တဲ့ ပင်လယ်အတုထဲမှာ လက်ပစ်ကူးကောင်းတုန်း။ အဲဒီကျောင်း တက်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ပြန်တွေးမိရင် တှောတှောပျှောဖို့ ကောင်းတယ်။
Posted by NLS at 12/13/2008 02:34:00 AM0comments Links to this post
Labels: Friend, Memoir, Photo
Posted by NLS at 12/13/2008 02:08:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/13/2008 12:19:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/12/2008 09:34:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/12/2008 09:25:00 PM0comments Links to this post
ရွှေပြည်ဆရာကြီး ဦးဘတင် ဆိုတာကို သူ့အကြောင်း မသိခင် သူ့ဟောပြောချက်တွေ စာတွေ မဖတ်ဖူးခင် ကတည်းက နာမည်ကြားရုံနဲ့ ချစ်ခင် လေးစားနေမိတာ။ နောက်ပိုင်း စာတွေနဲ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်လာတော့ ပိုလို့ လေးစားလာမိပါတယ်။ ဆရာကြီး မနဿတလေးမြို့ နှစ်၁ဝဝပြည့်ပွဲ ကာလ (၁၉၅၉) မှာ မနဿတလေး တကဿကသိုလ်မှာ ဟောပြောခဲ့တဲ့ ဟောပြောချက်တွေကို မိတဿထီလာ တကဿကသိုလ်က ဆရာဦးဝင်းတင့်က တိပ်ခွေကနေ ပြန်လည်ကူးယူ ရေးသားထားတာတွေကို အတွေးအမြင် စာစဉ်မှာ စဖှောပြကတည်းက လစဉ်လတိုင်း မပြတ်တမ်း ဖတ်လာခဲ့တာ ဗဟုသုတ အများကြီး ရပါတယ်။ ဆရာကြီး အဓိက ဟောပြောတာတွေက နန်းဓလေ့ ထီးမူနန်းရာတွေ အသုံးအနှုန်းတွေ အကြောင်း များပါတယ်။ ဒီတစ်လထုတ် အတွေးအမြင်မှာတော့ ရှေးခေတ် နန်းတွင်းသုံး ဆီမွှေး ပြုလုပ်ပုံလေး ပါလာလို့ မဖတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေပါ မှတ်သားနိုင်အောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလေး စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်အကြောင်း အတဿထုပဿပတဿတိ ဖတ်ကတည်းကပါ။ လှိုင်ထိပ်ထားက ကနောင်မင်းသားကြီး သိပ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သမီးတှောလေးကို ပေးတဲ့ ဆီမွှေးမှာ ပိုးဟပ်ဖြူပေါက်လေး ပါသွားလို့ သမီးတှောက တိုင်တာနဲ့ ကနောင်မင်းသားကြီးက လှိုင်ထိပ်ထားကို အမျက်ထွက်ခဲ့တာလို့ ဖတ်မှတ်ခဲ့ရဖူးတာကိုး။
ဆီမွှေး ဘယ်လိုလုပ်ကြရတုန်းဆိုတော့ နှမ်းကို ချွတ်လိုက်တယ်။ နှမ်းချွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ နီသလို မှိုင်းသလိုလိုဟာတွေ အပှေါဖတ်ကလေး ကျွတ်သွားတော့ နှမ်းဟာ ဖြူပြီးတော့ မွှေးကျန်ရစ်တယ်။ အဲဒီ ချွတ်ထားတဲ့နှမ်းကို နေပြင်းပြင်း လှမ်းလိုက်တယ်။ နေပြင်းပြင်း လှမ်းလိုက်တော့ ပူနေတဲ့ နှမ်းတွေမှာ သစ်စေးနဲ့ အလုံသုတ်ထားတဲ့ တောင်းရှိတယ်။ အဲဒီတောင်းနဲ့ ပယမ (ပထမ ရေးလိုရင်း ဖြစ်မည်ထင်သည်) ဒီဆီမွှေး လုပ်ဖို့ရာ စံပါယ်နံ့ကို လိုချင်လို့ရှိရင် စံပါယ်ပန်းကို အရင်ခင်းလိုက်တယ်။ ခင်းပြီးတော့ နှမ်းတစ်ထပ်၊ နောက်စံပါယ်တစ်ထပ်၊ နောက်နှမ်းတစ်ထပ်၊ နောက်စံပါယ်တစ်ထပ်၊ နောက်နှမ်းတစ်ထပ် ခင်းတယ်။ ခင်းပြီးတော့ ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ဒီပန်းတွေ နွမ်းသွားပြီးတော့ ဆန်ကာနဲ့ ချလိုက်တယ်။ ဒီနှမ်းတွေ တစ်ခါ ခြောက်အောင် လုပ်ပြန်တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် စံပါယ်တစ်ထပ်၊ နှမ်းတစ်ထပ် ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်။ နောက် သုံးခါ (လေးငါးခြောက်ခါ) စံပါယ်ပန်းတွေချည်း သူ့ကို တစ်ခါတည်း နှပ်နေတာ။ ကြာတော့ စံပါယ် မပါဘဲနဲ့ နှမ်းကို ဒီအတိုင်း ကောက်နမ်းလိုက်ရင် စံပါယ်ပန်း ပကတိကို နမ်းရသလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ အနံ့တွေ ကူးလာတယ်။ ဒီလောက် အနံ့ထုံမိပြီ ဆိုတော့မှ မဂဿငလာဆုံထဲမှာ ထည့်ပြီးတော့ ဆီရအောင် ကြိတ်တယ်။ ထွက်လာတဲ့ဆီက စံပါယ်ဆီ အဖြစ် ထွက်ရမယ်။ မဂဿငလာဆုံ ဆိုသည်မှာ ကုကဿကိုပင်ဆုံကြီးတွေ ရှိတယ်။ ဗမာက ကုကဿကိုပင်ကြီးက ဆုံပဲ။ ကုကဿကိုပင်ကြီးက ကျည်ပွေ့ပဲ စသည်ဖြင့် ဆုံတစ်ခုလုံးမှာ ဒီလို ထိုးရတဲ့ သတ်ကလေးမကျန် ဒီသစ်ပင် တစ်ပင်ထဲကချည်း လုပ်ထားသော ဆီဆုံလေးကို မဂဿငလာဆုံလို့ ခှေါတယ်။ စံပါယ်နဲ့ နှပ်ထားသော နှမ်းများက စံပါယ်ဆီ၊ မြလေးဆီ၊ ဒေါနဆီ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ပန်းရနံ့တွေ ဒီလိုလုပ်တာ။
ရွှေပြည်ဦးဘတင် စာပွဲသဘင်၊ အတွေးအမြင်၊ အမှတ် ၂၀၁၊ ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာ၊ စာ ၁၃။
Posted by NLS at 12/11/2008 04:41:00 PM0comments Links to this post
I m happy that my blog was listed rank 91st on Shinystat's Top 100 and 5th on Personal & Home Pages section. It is quite difficult to compete them asanon english blog. When blogspot.com was opend at Myanmar, I have got around 500 unique visitors daily and when it was banned, I lost most of them. So I tried hard to get back stable stats. There were two intention because of why I care much on that stats; first, you cant even imagine to make the standard business on net unless you hav less than 500 unique visitors. (I havent started it yet too (Future Plan :)). Second, stats shows the state of our blogs, so we can determine that many various things such what people are more interesting, what people want, what is user trend, so on. There were some limitations for myanmar blogs too, that it's hard to generate some effective keyword for adsense and it's hard to lure foreign visitors. So then cant hope much to get 10000+ unique visitors for till to 2015. But be remember that Myanmar has approx. 60 millions people. So everything can be happened when chances come and when all are in.
Now happy to announce that there are around 600+ unique visitors and daily page view 1000+. So thanks for everyone and hope to hang out with you all forever. Hug!
Posted by NLS at 12/11/2008 12:19:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/10/2008 02:48:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 12/09/2008 06:13:00 PM0comments Links to this post
မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်တဲ့ Carlos Antonio Falopa နဲ့ ဂိုးသမား အောင်အောင်ဦးတို့ကို အာရှဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က စကဿငာပူနဲ့ပွဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်အတွက် ကစားခွင့် တစ်ပွဲ ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ဂိုးမျိုးကို ပရီးရီးယားလိဂ်မှာ အာဆင်နယ် အသင်းက အွန်နရီ သွင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဂိုးပေးလိုက်လို့ ပြသဿသနာတွေ တက်ကြတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ စကဿငာပူ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် လဲကျနေတာ မထလာ သေးတာမို့ မြန်မာ ဘောသမားတွေ စောင့်ကြည့်နေကြတုန်း အလစ်အငိုက်မှာ ကန်သွင်းသွားတာပါ။ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဂိုးပေးလိုက်တာ မှန်ပါတယ်။ အောင်အောင်ဦး ဒိုင်သူကြီးကို အဝေးကြီးကနေ ပြေးလာပြီး တွန်းပစ်တာဟာ မှားတယ်။ မြန်မာတွေ အမြင်အရတော့ သူတို့ လူတစ်ဦး လဲကျနေလို့ ကိုယ်ကတောင် ဂရုဏာထားပြီး စောင့်ကြည့်နေချိန်မှာ ဒင်းတို့က လဲကျနေတဲ့သူကို ဂရုမထားဘဲ ကန်သွင်းသွားတယ်ပေါ့။ ကျွန်တှော့အမြင်ကတော့ ဒါဟာ သူ့အလုပ် သူလုပ်သွားတာပဲ။ တကယ်လို့ သူတို့က သူတို့လူကို ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုရင်လည်း ဒါက သူတို့ သမိုင်းလေ။ ကိုယ်ကတောင် နာမည်ကောင်း ယူရဦးမှာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ယူမယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်တာဝန်ကို ပစ်ထားလို့ ဘယ်ရမလဲ။ ဂိုးသမားက ဂိုးမဝင်အောင် သတိရှိရှိ စောင့်နေရမှာပေါ့။ နောက်တန်း သမားတွေကလည်း ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သတိရှိနေရမှာပေါ့။ အလုပ်တွေကို ရောယှက်မပစ်သင့် ဘူးလေ။ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသာ အဓိက ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ကြိုးစားပြီး ဂိုးသွင်းနေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စကဿငာပူကို အကောင်းမမြင်ပေမယ့် ဒီဟာကတော့ သူ့အလုပ် သူလုပ်သွားတာမို့ မှန်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ စကဿငာပူအသင်း ညစ်ပတ်တာကတော့ သူ့သမိုင်းနဲ့ သူပါပဲ။ မြန်မာတွေ သတိလက်လွတ် ဖြစ်ပြီး ရန်သူကို လျှော့တွက်လိုက်လို့ ခံလိုက်ရတာပဲ။ မြန်မာတွေက တခုခုဖြစ်ရင် ကွန်ပလိန်းတွေတက် ပြသဿသနာတွေရှာ ဆိုတာမျိုးက သောက်ကျင့်ပါနေပြီ။ ဒီသင်ခန်းစာမျိုး ရင်ထဲစွဲနေအောင် မှတ်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်လိုက်မိသေးတယ်။ ရှုံးတာ နဲတောင် နဲသေးတယ်ဗျာ။
Posted by NLS at 12/09/2008 05:45:00 PM0comments Links to this post
မနေ့ညက ဂူဂယ်လ်ကနေ ဟိုတစ်နေ့ကကိစဿစ အတွက် စာပြန်ရောက်လာတယ်။ သူတို့ အဲဒီကိစဿစကို စစ်ဆေးနေပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ထူးဆန်းတာ တစ်ခုကို ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အပြင်မှာ မပြောပါနဲ့ဦးလို့ ပြောထားလို့ ကျွန်တှော မပြောသေးဘူး။ သူတို့ ထပ်မံ အတည်ပြုမယ်တဲ့။ ကျွန်တှောလည်း တိတိကျကျ သိချင်နေတယ်လေ။ ဟုတ်လို့ကတော့။
Posted by NLS at 12/09/2008 09:42:00 AM0comments Links to this post
မနေ့ကပဲ ကျွန်တှောတို့ နေတဲ့တိုက်ကို လျှပ်စစ်ရုံးက စာရောက်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ခြောက်နာရီပဲ မီးရပါတော့မယ်တဲ့။ သုံးရက် တစ်ခါတော့ ၁၂ နာရီ ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်လို့ Load Shed လုပ်တယ် ဆိုလားပဲ။ တိုက်က မီးစက်က ညနေ ၅နာရီကနေ ည၁ဝနာရီ အထိတော့ ပေးမယ်ပေါ့။ တှောတှောလေး စိတ်ဓာတ်ကျမိတယ်။ ကျွန်တှော စိတ်ဓာတ်ကျတာ မပြောနဲ့ အိမ်က အကိုရဲ့သား တူလေးကတောင် သားသေချင်တယ် မီးတွေပျက်လို့တဲ့။ သူကတော့ ကလေးအတွေး အဲယားကွန်း မလာလို့ ပူတာ၊ ဂိမ်းမဆော့ရလို့ ပျင်းတာပဲ ရှိတာပေါ့။
ပြီးတော့ တစ်လတစ်လ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ စရိတ်တွေက မနည်းပါဘူး။ မီးစက်ဖိုး၊ ဓာတ်လှေခါးဖိုး၊ သန့်ရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဘာကြေး ညာကြေး စုံနေတာပဲ။ အေးအေးလူလူ အဆင့်မြင့်မြင့်လေး နေနိုင်အောင်လို့ ဒီအခန်းလေး ဝယ်ထားတယ်။ သုံးထပ်နဲ့ ၁၁ထပ် ဘယ်ဟာ ရွေးရမှန်း ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေချိန်မှာ နိုင်ငံခြားပြန် အမေကျှော ဒွေးတှောလွမ်းစိတ် မကုန်တဲ့ ကျွန်တှောက ကွန်ဒိုဆိုတာ မြင့်လေကောင်းလေဆိုပြီး ၁၁ထပ်ကို ဝယ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာ။ အခုတော့ ဓာတ်လှေခါး တစ်ခါစီး ၁၅၀၀ တစ်လတစ်လ ဓာတ်လှေခါးဖိုးတင် မနည်းပါဘူး။ အိမ်ကို လာလည်သူ ဧည့်သည်တွေကိုလည်း ၁၁ထပ်အထိ တက်ခိုင်းရမှာ အားနာတာမို့ သူတို့ လာရင်လည်း မီးစက်နှိုး ဓာတ်လှေခါး ဖွင့်ခိုင်းရပါသေးတယ်။ ဟိုးတုန်းကတော့ ကွန်ဒိုတွေ မီးဖြတ်ရင်တောင် ဓာတ်လှေခါးမီးတော့ ပေးထားမယ်ဆိုပြီး ကြားလိုက်သေးတယ်။ ဒါကလည်း ကြားလိုက်တာပဲ ရှိတာပါ။ ဖြစ်မလာပါဘူး။ အဲဒီ ဓာတ်လှေခါး မပျက်အောင်လည်း ဆုတောင်းရသေးတယ်။ တစ်ခါပျက်လို့ ပြင်မယ်ဆိုရင် အခန်းအားလုံးက ပိုက်ဆံပေးရတယ်။ တစ်ခါပြင်ရင် သိန်း ၃ဝလောက် ကျတာပါ။ အခန်းတစ်ခန်း ဝယ်ရင် ကားပါကင် တစ်နေရာ ရပြီးသား။ အဲဒါကို ဘယ်လို Shuffle လုပ်သလဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံပေးတဲ့သူက နေရာကောင်းရတယ်။ မပေးတဲ့သူက ဟိုးမြေအောက်ထဲ ရောက်တယ်။ သူတို့အဘ ဆရာကြီးတွေကား ရပ်ထားရင်တော့ ဖင်တုန်အောင် ဘာမှ မပြောရဲဘူး။ ပြီးတော့ လွတ်နေတဲ့ ကားပါကင်တွေကို လုပ်စားကြသေးတယ်။ အငှားချတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တှောတို့ဟာ ဘာဆားဗစ်များ ရလို့လဲ။ ကွန်ဒိုမှာနေပြီး ကိုယ့်ဒုကဿခ ကိုယ်ခံနေတာနဲ့ အတူတူပဲ။ ကျွန်တှောတော့ တှောတှော စိတ်ကုန်နေပြီ။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ တစ်ခန်းကို ယေဘုယျ သိန်း၅ဝဝနဲ့ အခန်းပေါင်း ၅၀ သိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင် ရထားပြီးတော့ ဘာတွေများ ဆားဗစ်ပြန်ပေးသလဲဆိုတာ။ ရိုးရိုးတိုက်ခန်း ငှားနေတာနဲ့ ဘာမှမထူးတော့ဘူး။ နောက်ကြုံရင် အဲဒီလို အိမ်ရာတွေမှာ ရိုက်စားလုပ်ပြီး သိပ်ကြီးပွားနေတဲ့ သူတွေအကြောင်း ရေးပါဦးမယ်။
စကားမစပ် ကျွန်တှော ၁၃ရက်နေ့မှာ ပြင်ဦးလွင် ကွန်ပျူတာပွဲကို MCPA အနေနဲ့ သွားရမယ်။ စာမေးပွဲ သွားစောင့်ရမှာ။ အချိန်ရရင်တော့ ပြင်ဦးလွင်တဝိုက် ဓာတ်ပုံလေးတွေ လျှောက်ရိုက်ခဲ့ဦးမယ်။ ဘယ်မှ သွားချင်စိတ် မရှိပေမယ့် မွန်းကြပ်နေတဲ့ ကာလတစ်ခုမှာ အေးချမ်းတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုကို သွားရမှာမို့ စိတ်နဲနဲတော့ အပန်းပြေသွားမလားပဲ။
Posted by NLS at 12/08/2008 11:30:00 AM0comments Links to this post
ဒီနေ့ သွားဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေ
20 Vector Graphics Editors
Username Check ******************
Ipernity: Pic Sharing
Lovely Package: Design
Today Featured Pics:
La Vierge, L'Enfant Jesus et Saint Jean Baptiste
Posted by NLS at 12/07/2008 09:16:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Picture, Sharing
Posted by NLS at 12/07/2008 02:46:00 PM0comments Links to this post
ဒါလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကျှော ၂၀၀၆ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က တင်ထားခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ဒီနေ့မှ ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း အမှတ်တရ ပြန် Update လုပ်လိုက်တယ်။ မစနေရယ်၊ မဟနရယ် ကျွန်တှောရယ်က အဲဒီမတိုင်ခင်က အွန်လိုင်းမှာ စာတွေ အသားကုန်ရေးနေကြတဲ့ အချိန်ပေါ့။ သူတို့ နှစ်ယောက်က မြန်မာချတ်က မင်းသမီးတွေ။ ကျွန်တှောက ပလန်းနတ်က လူကြမ်း။ စာအုပ်လေး လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တှော တစ်ခါရေးဖူးတဲ့ လူငယ်နဲ့ မြို့ရိုးဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ယူလိုက်ကြတယ်။ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီအတွက် လှတပတ သရုပ်ဖှောပုံလေးတွေ ရေးဆွဲပေးသူက ကိုပူစီတဲ့။ သူ့ကို ကျွန်တှော မတွေ့တာ တှောတှောကြာပြီ။ နောက်ဆုံး အခေါက်က ကျွန်တှော့က The Myth ထဲက ဂျက်ကီချန်း သီချင်းကို မြန်မာမှု ပြုခိုင်းသေးတယ်။ သူဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ပျက်သွားတဲ့ ဟာဒ်ဒစ်ထဲ ပါသွားတာ တှောတှော နှမြောမိတယ်။ ဒါလေးမြင်တော့ မလေးလုံးဆိုတဲ့ အမကြီး တစ်ယောက်လည်း သွားသတိရမိသေးတယ်။ သူကလည်း နာမည်ဝှက်နဲ့ ကျွန်တှောကလည်း နာမည်ဝှက်နဲ့။ ကျွန်တှော့ နာမည်ဝှက်ကို အဲဒီ အမကြီးကိုပဲ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ သူနာမည်ဝှက်ထားတာတော့ သူ့စာအရေးအသား ကြည့်တာနဲ့ ကျွန်တှောက သူဆိုတာ ထင်လိုက်ပြီးသား။ သူနဲ့ ကျွန်တှော အပြန်အလှန် ရယ်စရာ ကဗျာတွေ ရေးကြတာ မှတ်မိနေတယ်။ ပလန်းနတ် ဆာဗာဒေါင်းသွားတော့ အဲဒီပိုစ့်တွေ ပျက်သွားတာ သိပ်နှမြောမိတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က စစ်ဆေးကနေ ရုရှားမှာ ကျောင်းသွားတက်တဲ့ mylittleforest ဆိုတဲ့ အကိုတစ်ယောက်လည်း သတိရမိသေးတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်တှော စာပေ အကြောင်း တှောတှောလေး ဆွေးနွေး ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ နောက်တစ်ယောက်က ပလန်းနတ်က နာမည်ကျှော မမဗန်လို့ခှေါတဲ့ ဆုံးပါးသွားတဲ့ အကိုတစ်ယောက်။ တစ်ချိန်ချိန်ကျရင်တော့ အွန်လိုင်းကနေ ကျွန်တှောနဲ့ တှောတှောလေး ခင်ခဲ့တဲ့ သူတွေအကြောင်း တင်ဦးမယ်။ ရေးထားပြီးသားတွေ ရှိပါတယ်။ မတင်ဖြစ်သေးတာ။
Posted by NLS at 12/07/2008 01:17:00 AM0comments Links to this post
Labels: Friend, Memoir
ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုဒ် ရှိသူတိုင်း Social Network သဘောမျိုး တည်ထောင်နိုင်တဲ့ Google Friend Connect ဆိုတဲ့ ဟာလေးပါ။ ဘလောဂ်တွေမှာ ထည့်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Web Hosting ရှိတဲ့ Site မျိုးမှ ရပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် လုပ်ကြည့်သလောက်တော့ ကျွန်တှောယူထားတဲ့ Google Site မှာတော့ ဒါကို ထည့်သွင်းလို့ မရသေးပါဘူး။ ထပ်တော့ စမ်းကြည့်နေဆဲပါပဲ။ Application တွေကို ထည့်သွင်းရတာ တှောတှော လွယ်ကူပါတယ်။ မခက်ခဲပါဘူး။ သူပေးထားတဲ့ ဖိုင်လေး နှစ်ခုကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Main Root နေရာမှာ ပြန်တင်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ နမူနာ ဆိုက်တွေကို ဒီနေရာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Update (1) !
Sorry! ကျွန်တှော ပထမ ရေးထားတာ မှားသွားတယ်။ သူ့ရဲ့ Group ဆွေးနွေးချက်တွေကို သွားဖတ်ကြည့်မှ Blogspot ဘလောဂ်တစ်ခု ရှိသူတိုင်း ထည့်လို့ရတာ သိလိုက်ပါတယ်။ အခြားဆိုဒ်များအတွက်သာ သူပေးထားတဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုကို Upload လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလောဂ်စပေါ့မှာ မလိုပါဘူး။ အလိုအလျောက် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Setup လုပ်ချိန်မှာ ဒီဖိုင်နှစ်ခုကို တင်မနေဘဲနဲ့ Continue ဆိုတာလေးကိုပဲ ရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Code ထွက်လာတဲ့အခါ အဲဒါကို ကူးပြီး Side Bar တစ်နေရာရာမှာ Cbox သွင်းသလိုပဲ သွင်းလိုက်ရုံပါ။
စမ်းသပ်ကြည့်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။ အခု ကျွန်တှော့ဘလောဂ်ရဲ့ ညာဘက် အပှေါဆုံးမှာ Online Friends ဆိုပြီး မြင်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ co.cc တို့ အခြား ဒိုမိန်းအမည် ပြောင်းထားတဲ့ ဘလောဂ်တွေဟာ ဒီ Gadget ကိုသွင်းရာမှာ ပြောင်းထားတဲ့ နာမည်ကို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Gadget အပြင် အခြား Cbox ပုံစံ Comment Wall ကိုလည်း ထည့်သွင်းလို့ ရသွားပါပြီ။ အရင်ကလို Cbox ထည့်ချင်ရင် အခြား Third party Gadget တွေရှာထည့်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Google system တစ်ခုထည်း အတွင်းမှာဖြစ်လို့ ပိုပြီးလည်း မြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Google Profile မရှိသူတွေ အဲဒီမှာ ရေးလို့ မရအောင်လည်း ကန့်သတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါဦး။
Google ဟာ ကျွန်တှော တစ်ခါက ပြောခဲ့သလိုပဲ [link] တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ရဲ့ Stand alone application တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက် လာလိုက်တာ အခုဆို တှောတှောလေး ရုပ်လုံးပှေါနေပါပြီ။ အစပိုင်းမှာတော့ သူ့ဟာ တစ်ခုခုကို အခြား Third Party တွေနဲ့ တွဲသုံးနေရပေမယ့် နောက်ပိုင်း အဲဒါကို အစားထိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးပိုပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့တဲ့ Online Application တွေကို အသုံးပြုလာနိုင်တော့မယ်လို့ ကျွန်တှော ယုံကြည်နေပါတယ်။
Posted by NLS at 12/06/2008 06:32:00 PM0comments Links to this post
Labels: Google, Website
Digital Drawing by NLS
Source: Burmese Designs through Drawing by U Aye Myint
Posted by NLS at 12/05/2008 10:25:00 PM0comments Links to this post
Labels: Arts, Download, Sharing
England, about 1595
Gold with enamel, rock crystal, table-cut diamonds and Burmese rubies
Given by Lord Wakefield through the Art Fund
Source: V&A Hidden Treasures
Posted by NLS at 12/04/2008 09:57:00 PM 1 comment Links to this post
Posted by NLS at 12/04/2008 08:28:00 PM0comments Links to this post
This morning, I've seenabig surprise of Google account. Actually I was signed in with my google account lynnseck@gmail.com and was exploring around my sites and features. A few minutes later, I was invited to Google Friend Connect application to use asasite owner. So i was trying to put that code in my site. Surprisingly! my account was automatically redirected to someone's account as aktsandar@gmail.com and been to his site www.soethura.org. I was so surprised and amazed in stunned, then I checked if I can manage everything at his site, the result is YES! So I droppedafew comments in his home page and then logged out. I dont know how it was happened. Any can explain me that, means it is google security hole, or I accidentially hacked someone site, or my account was hacked?
ဒီနေ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း တစ်ခုတွေ့တယ်။ တှောတှောလေး ထူးဆန်းတယ် ပြောရမလားပဲ။ ဂူဂယ်လ်ဆိုက်ကို သုံးနေရင်း ကျွန်တှော အလိုလို အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ အကောင့်ထဲကို ရောက်သွားတယ်။ အကောင့်က aktsandar@gmail.com ဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ root ကိုကြည့်လိုက်တော့ Soethura.Org ဆိုတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဖွင့်ထားတယ်။ ကျွန်တှော့အကောင့်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ သူ့အကောင့်နဲ့ ဝင်သွားတာနှော။ သူ့ဆိုဒ်ထဲမှာ ကျွန်တှော ကြိုက်တာ လုပ်လို့ရနေတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တှော သူ့ကို သတိပေးတဲ့စာလေး ရေးပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ တှောတှောလေး ထူးဆန်းတယ်။
Yes it must be google's big security hole. But I m not the first one to whom it was happened: I found outacase which was quite similar with me, perhaps I didnt touch anything at dns. I think its vulnerability is in either Google Site or Google Friend Connect; the new one! See here
They said fixed, but now you see how? :)
I've already reported to Google Security Team and waiting for their reply.
Sorry for my mistake: the correct link is
PS. I forgot to putabig smile (:)) at last! Just wanna remind you all, dont believe on net, and dont put every secrets on net or electronic devices. me tooo (again :))
Posted by NLS at 12/04/2008 01:04:00 AM0comments Links to this post
Labels: Computer, Google, News
ကျွန်တှော ဒီ Digital Drawing Tablet လေးကို လိုချင်နေခဲ့တာ ၃နှစ်လောက် ရှိခဲ့ပြီ။ စကဿငာပူမှာ ကတည်းက။ ဒါပေမယ့် မဝယ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခြားနိုင်ငံတွေ ရောက်ဖြစ်တဲ့ အခါမှာလည်း ခဏခဏ သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဝယ်ခါနီးတိုင်း ပိုက်ဆံကို ငဲ့ငဲ့ပြီး လက်တွန့် နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါလေးက ကျွန်တှောတို့လို Graphic Artist တွေအတွက် မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်လွန်းပါတယ်။ သာမန် ရုပ်ပုံတွေ ဆွဲရာမှာ စုတ်တံကိုကိုင်ပြီး ဆွဲနေရသလို ဆွဲလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ Illustration တွေမှာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ရတယ်။ တိကျတယ်။ တစ်ခါတုန်းက Audrie Tautu ရဲ့ပုံကို ၂၄နာရီကျှောကြာအောင် Mouse အသုံးပြုပြီး Photo Realistic Rendering လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်တမ်း ဒါမျိုးနဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သိပ်မကြာဘူး။ ပြီးတော့ ရုပ်ထွက်ပိုကောင်းတယ်။ အသေးစိတ် တိတိကျကျလည်း ဆွဲလို့ရတယ်။ မြေပုံတွေ ဆွဲတုန်းကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ Mouse အသုံးပြုပြီး ဆွဲခဲ့ရတာ။ တကယ်တမ်း ဒါလေးနဲ့ဆို တစ်ရက်တည်းနဲ့တောင် ပြတ်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တှော ချောင်းနေခဲ့တာ။ တစ်ရက်တော့ ဘလောဂ်ကို အမြဲလာလာဖတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားက အကို KMAက သူမြန်မာပြည် ပြန်လာမယ် ဘာမှာမလဲဆိုလို့ အတင်းကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီး Wacom Intuois 4x6 မှာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒေရှင်နရီ ပရောဂျတ်အတွက် ဒှေါလာ၂၀၀ ကြိုထုတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောက်တော့ အဲဒီအကိုက ပိုက်ဆံမယူဘဲ လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တှော့အတွက် သိပ်အသုံးလိုမှန်းသိလို့ ပေးတာပါလို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တှော့တစ်သက်မှာ ကိုယ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင် မသိသေးတဲ့ သူတစ်ဦး စီကနေ ပထမဆုံး လက်ဆောင် ရတာပါပဲ။ လက်ခံရတာလည်း အလွန်အားနာပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တှော့အတွက် Quite much amount of money ပါ။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံမကုန်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တှော အရမ်းပျှောမိတယ်။ ကျွန်တှောလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို လက်ခံအားပေး ကူညီတဲ့ သူတစ်ယောက် ရှိနေတာ သိရတဲ့ အတွက်ပါ။ ဒီအတွက်လည်း အကို ကိုKMA ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နာဂစ်တုန်းကလည်း စကဿငာပူက အမတစ်ယောက် ကနေ ကျွန်တှောတို့ကို ကဒ်လေးတွေ ပို့ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း သူပို့လိုက်တဲ့ ကဒ်လေးတွေနဲ့ စာလေးတွေဖတ်ပြီး ကျွန်တှောတို့ အားတက်ခဲ့ရတယ်။ အရာရာတိုင်းကို ပိုက်ဆံနဲ့ တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး။ ပိုက်ဆံပေးတိုင်းလည်း လူတိုင်းကို ပျှောရွှင်မှု ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေက ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေး စရတဲ့ နေ့ကစပြီး ကျွန်တှော အလုပ်တှောတှော ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက လုပ်လက်စဖြစ်တဲ့ ရှေးရိုး မြန်မာကနုတ်တွေ၊ မြန်မာ ဒီဇိုင်းတွေကို တစ်ရက်ကို တစ်ပုံ Digitize လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ဆွဲထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ပြန်ဆွဲတာ ထင်သလောက် မလွယ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး စာအုပ်ကို တစ်ရွက်စီ ဖြုတ်ပြီးတော့ စကန်ဖတ်တယ်။ ပြီးတော့ စာအုပ်ထဲက ဒီဇိုင်းတွေကို ကျွန်တှော ပြန်ပြင်ယူတယ်။ လိုနေတာတွေ ထပ်ထည့်တယ်။ တှောတှောလေးတော့ ပင်ပန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၉ မှာတော့ အဲဒီ ဒီဇိုင်းတွေအားလုံး ပြီးလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဘီလူးခေါင်းတွေ ဆွဲနေတယ်။ နောက်ပိုင်းလည်း ဆွဲဖြစ်တာလေးတွေ ဒီကနေ မျှဝေပါဦးမယ်။ ထုတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကိုတော့ မနက်ဖြန် အင်ဗာတာလေးဖြစ်ဖြစ် မီးစက်အသေးလေးဖြစ်ဖြစ် ဝယ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
Posted by NLS at 12/03/2008 11:43:00 PM0comments Links to this post
တစ်ခုခု ရေးမလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ရေးချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး။ ဘလော့ဂင်း လုပ်နေမိခြင်းကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရတော့မယ်။ ၃-၄နှစ် အချိန်အများကြီးပေးပြီး လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဘာများ ကိုယ့်အတွက် ကျန်ခဲ့သလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ အနဲအပါး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Profit နဲ့ Lost နဲ့က မမျှဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်တွက်ကိန်းတချို့ မှန်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ရန်သူနဲ့ မိတ်ဆွေ ဘယ်ဟာ ပိုများလာသလဲဆိုတော့ ကိုယ့်အပြောအဆိုတွေက တပါးသူ နားခါးစရာ ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး မိတ်ဆွေဆိုလို့ လက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အလုပ်လုပ်မယ်ပြင်လိုက် မီးကပျက်လိုက်နဲ့ တစ်နေ့ လာတဲ့မီးဟာ တစ်နာရီတောင် ပြည့်ရဲ့လား မသိဘူး။ ဒီတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တှော့အတွက် ခက်ခဲတဲ့ ရက်တွေပါပဲ။ ဒါကို ဒီအတိုင်း ထိုင်ညည်းနေလို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာလည်း နားလည်ပါတယ်။ ဒီတော့ မနက်ဖြန် မီးစက်အသေး ဒါမှမဟုတ် အင်ဗာတာနဲ့ ဘက်ထရီ တစ်ခုခု ဝယ်ရတော့မယ်။ အင်တာနက်ကိုလည်း နဲနဲ စိတ်ကုန်သလို ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက် ဟိုသတင်း ဒီသတင်းတွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ဆဲစာဆိုစာ အပြစ်တင်စာတွေပဲ များနေသလိုပဲ။ ရိုက်လိုက်ကျတဲ့ တင်းနစ်တွေကလည်း အားကောင်းသလား မမေးနဲ့ ဟိုဘက်ဆို ကွင်းဆုံးအထိ ဒီဘက်ဆို ကွင်းဆုံးအထိ။ ညာဘက်လက်က ဘယ်ဘက်လက်ကို မကောင်းပြောတယ်။ ဘယ်ဘက်လက်က ညာဘက်လက်ကို အသုံးမကျဘူးပြောတယ်။ ဆဲကြတယ် ဆိုကြတယ်။ ကြာတော့ ဒါတွေဖတ်ရတာကို စိတ်ကုန်လာတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ပလေတိုလည်း ယူတိုးပီးယားကို စာထဲမှာပဲ တည်သွားနိုင်ခဲ့တာလေ။ ဒါပေမယ့်လည်း စာရေးတယ်ဆိုတာက စိတ်အပန်းဖြေစရာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှာကြံ နှစ်သိမ့်စရာ တစ်ခုခုလည်း ဖြစ်နေနိုင်တာပဲ။ မျက်စိတွေ ပိုပိုစပ်လာတာကတော့ တကယ်ပါပဲ။
Posted by NLS at 12/03/2008 06:58:00 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ သွားဖြစ်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်များ
Atlas of Myanmar: Wiki
www.beebo.com: Social Networking
Ding its Up: Web Alert
Burma Topographic Maps:
Viwawa: Online Game
Filehippo: Download Free & Sharewares
Aviva: Rapidshare Download
Lower Intelope of Grand Canyon: Wiki
Vijara Mudra: Wiki
Posted by NLS at 12/02/2008 04:39:00 PM0comments Links to this post